ज्यानमारा नक्कली डाक्टर समात्दा बिरोध गर्ने मेडिकल काउन्सिलको नियतके ? #iAmWithNepalPolice ~ Khabardari.com
ज्यानमारा नक्कली डाक्टर समात्दा बिरोध गर्ने मेडिकल काउन्सिलको नियतके ? #iAmWithNepalPolice
9:58 AM admin No comments
जे गर्न पनि मिल्ने देश हो नेपाल?
यिनीहरुनै सर्वसाधारणको ज्यानसँग खेलबाड गर्ने अनि यिनीहरुलाई पक्रदा पनि आन्दोलन? आन्दोलन गरेर सेवा ठप्प पार्छ त्यसको अस्पताल सधैँको लागि ठप्प पार्नुपर्छ |
नक्कली डाक्टरलाई कारवाही गर्दा मेडीकल काउन्सीलले सहयोग गर्नु पर्ने ठाउँमा झन बिरोध गर्नु हत्यारा लाई बचाउन खोज्नु जस्तै हो त्यसैले मेडीकल काउन्सीलको नियत के हो ?
समाचार यस्तो छ ?
प्रहरीले दबंग शैलीमा डाक्टरहरुलाई पक्राउ गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरेको छ । उसले भोलि गृहमन्त्री, गृहसचिवदेखि प्रहरी प्रमुखलाई विरोध पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।
नक्कली डाक्टर भएको अभियोगमा प्रहरीले विभिन्न जिल्लाबाट चिकित्सकहरुलाई पक्राउ गरेपछि चिकित्सक संघले विरोध गरेको छ ।
यद्यपि उसले छानविनको नभई पक्राउ शैलीको विरोध गरेको बताएको छ । ‘विरामी बनेर टिकट काट्छ र डाक्टरलाई हतकडी लगाएर बाहिर ल्याउँछ’ महासचिव मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘दबंग शैली अपनाइएको छ । यो प्रक्रियाको हामीले विरोध गरेका हौं।’
चिकित्सक संघले यसबारे धारणा तय गर्न दिउँसो बैठक समेत बोलाएको थियो । बैठकले प्रहरीको कारबाहीबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिलको धारणा मागेको छ र भोलि सम्वद्ध निकायलाई विरोध पत्र दिने निर्णय गरेको छ ।
संघका सदस्य प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘छानविन गर्नु पर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिल हो । उ चुप बसेको छ । र, प्रहरी नियमक र कार्यकान्वयन गर्ने जस्तो भएर दबंग शैलीमा पक्राउ गरेको छ । यसको हामीले विरोध गरेका छौं ।’